Fokon' i Efraima - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Fokon'i Efraima)
Ny fokon' i Efraima dia vakiny iray ao amin' ny fokon' i Jôsefa izay isan' ny foko roa ambin' ny folon' i Israely. Ny vakiny faharoa dia ny fokon' i Manase. Araka ny Baiboly, tamin' ny ady nifanaovan' ny fokon' i Efraima tamin' ny sisan' ny fokon' i Israely dia ampy hahafantarana ny Efraimita ny tsy fahaizany manonona ny hoe שִׁבֹּלֶת / shibboleth izay tononiny hoe sibbolet (Mpitsara 12.4-6).
1 I Efraima
2 Olona isan' ny fokon' i Efraima
I Efraima (hebreo: אֶפְרַיִם na אֶפְרָיִם / Efrayim) dia zanaka lahy faharoan' i Josefa tamin' i Asnata vadiny ary i Manase no rahalahiny. Ireto ny zanany lahy: Sotela, Bekera, Tahana (Nomery 26.35), Ezera, Eleada ary Beria (1Tantara 7.20-23).
Olona isan' ny fokon' i EfraimaModifier
Isan' ny fokon' i Efraima i Jôsoa (na Jôsoe) sy i Jeroboama I mpanorina ny Fanjakan' i Samaria.
Anisan' ireo fokon' i Israely nanjavonaModifier
Isan' ny Fanjakan' i Samaria ny fokon' i Efraima tamin' ny fisarahan' ny Fanjakan' i Israely ho fanjakana roa. Tamin' ny nandravan' ny Asiriana ny io fanjakana io dia natao sesitany niaraka amin' ny foko sivy hafa tany Asiria vahoaka tao amin' ny fokon' i Efraima ka lazaina fa isan' ireo foko nanjavona izy. Ireo Samaritana amin' izao fotoana izao dia milaza fa taranak' i Efraima sy Manase.
Fokon'i Israely: Robena - Simeona - Levy - Jodà - Isakara - Zabolona - Dana - Naftaly - Gada - Asera - Jôsefa (Manase sy Efraima) - Benjamina.
↑ "4 Ary Jefta dia namory ny lehilahy rehetra amin' ny Gileada ka niady tamin' ny Efraima; ary dia namely ny Efraima ny lehilahy amin' ny Gileada, satria hoy ireo: Hianareo Gileadita dia mpandositra avy amin' ny Efraima ao amin' ny taranak' i Efraima sy Manase. 5 Dia novonjen' ny Gileada ny fitàna any Jordana mankany amin' ny Efraima; ary nony niteny ny mpandositra avy amin' ny Efraima nanao hoe: Aoka mba hita aho; dia hoy ny lehilahy amin' ny Gileada taminy: Efraimita va ianao? ary raha hoy izy: Tsia, 6 dia hoy izy ireo taminy: Tonony ary ny hoe Shiboleta; fa hoy kosa izy: Siboleta, satria tsy nahay nanonona izany marina izy. Dia nisambotra azy ireo ka namono azy teo amin' ny fitàna ao Jordana; ary nahafatesana roa arivo sy efatra alina ny Efraimita tamin' izany andro izany." (Mpits. 12.4-6) (Ny Baiboly)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fokon%27_i_Efraima&oldid=1037435"
Dernière modification le 5 Septambra 2021, à 16:28
Voaova farany tamin'ny 5 Septambra 2021 amin'ny 16:28 ity pejy ity.